. Lohalaharana amin’izany i Chine, izay firenena nipoiran’ilay tsimok’aretina coronavirus nefa tena mpamatsy ny firenena an-dalam-pandrosoana toa antsika. Mpiasa 2200 indray afak’omaly no nalefa « chômage technique » . Niasa tamina orinasa afaka haba iray etsy Ankadimbahoaka izy ireto. Mandritra ny fotoana tsy voafetra no iainan’ireo mpiasa izany raha araka ny fantatra nefa nihindram-bola tany amin’ny banky avokoa ny ankamaroan’izy ireo.Ankoatra izay dia orinasa afaka haba iray eny Andranomena ihany koa no nandefa mpiasa an’arivony ho chômage technique afak’omaly ihany ka velon-taraina avokoa ireo voakasika. Marihina moa fa maro tamin’ireny orinasa afaka haba ireny no nanome toky ny filoha fa hitazona hatrany ny mpiasa ao aminy saingy ankehitriny tsy hita taratra intsony izany. Velon-taraina ireo mpiasa ny amin’ny fiainany satria misy tsy voaloa araka ny tokony ho izy ny zon’ny mpiasa araka ny nambaran’izy ireo.Etsy ankilan’izay koa anefa mazava be fa mihena mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy ny kaomandin’entana ataon’ny any ivelany noho ireo firenena maro sahirana noho ny Coronavirus, ka izay no mahatonga ireo tompona orinasa manakatom-baravarana aloha.